पोलिगामी प्राणीमा गाई, भैंसी, बाख्रा आदि पर्छन् भने केही चराहरूमा एकै भाले र पोथीसँग नै रमाउने स्वभाव हुन्छ। जुन दिन परिवार, स्वास्थ्य तथा बालबच्चाको लालनपालनजस्ता कार्य सरकारको दायित्वमा पर्छन् त्यो दिनबाट परिवार भन्ने विषय वैकल्पिक बन्नेछ। यसको विकल्पमा विज्ञान र राज्यको भूमिका प्रधान हुनेछ।
साथै पुरुष र महिलाको हैसियत जबर्जस्ती करणीमा बाहेक अरूमा समान हुनेछ।अहिलेको कानुनले यति धेरै स्वतन्त्रता र पीडा महिलालाई दिएको छ कि यसको कुनै पनि तुलना नै हुन सक्दैन। करिब–करिब महिलाले हरेक राजिखुशीले भएको यौनसम्बन्धलाई चाहेमा रेप हो भन्न सक्ने अवस्था छ।
यौनसम्बन्धभन्दा पहिला कसैले पनि यो कार्य राजिखुशीले भएको हो भनेर लेखाउँदैन र लेखाए पनि त्यो पनि जबर्जस्ती लेखाइएको हो भन्न सकिन्छ अनि साक्षीहरू राख्न त सम्भव नै हुँदैन। महिलालाई गलत प्रभावमा पारेको र यौनकार्य गरेको तथा त्रास देखाएको भन्ने आरोप लागेमा खुशिराजीले यौनसम्बन्ध राख्ने पुरुषको सामाजिक नैतिकतासमेत जहिले पनि धरापमा नै पर्ने कानुन हामीकहाँ छ।
महराकै कारणले उनीसँग नजिक भएको भनिएकी महिलाको विवाह अर्को व्यक्तिसँग भएर पनि पतिले उनीहरूको सम्बन्ध थाहा पाएकोले ती महिलालाई तनाव भएको हुन सक्छ। महराको बारम्बारको इच्छा पूरा गर्नुपर्ने र त्यो समाजको अगाडि बेइज्जतको विषय बन्न सक्नेसमेत ती महिलालाई पीडा र चिन्ता भएको हुने आधार हो। तिनै पीडा र चिन्ताको कारणले उनलाई डिप्रेसन हुन सक्नु अर्को पक्ष हो।
उनलाई डिप्रेसन हुनुमा महरासँगको सम्बन्ध र त्यसबाट भएको तनाव कारक तथ्य हुने सम्भावना छ। यस अर्थमा महराको गैरवैवाहिक यौनसम्बन्धमा उनको पदको त्रास र परिबन्धले काम गरेको हुन सक्छ। तर महरा मात्र गल्तीका कारक तत्व मान्न सकिँदैन। महराका जस्ता गल्तीहरूलाई अपराधको आधार वनाउने हो भने समाजमा यस्ता अपराधहरू धेरै हुन सक्छन् भन्ने मापन तयार होला।
अर्कोतर्फ विवाह गर्नको लागि अभिभावकले उचितरुपमा दबाब दिन नसक्ने र २० वर्षको उमेरभन्दा पहिला विवाह पनि हुन नसक्ने अवस्थामा १३ वर्षदेखि यौनेच्छा जाग्न सक्ने देखिन्छ। महिलाले जहिले पनि खुशीले यौनसम्पर्क गर्दा गराउँदासमेत उनको सम्बन्ध र परिणाम धराप र जोखिममा रहिरहने हुन्छ। महिलाको कुनै सम्बन्ध भयो तर उनको २० वर्ष उमेर पुगेको छैन भने विवाह हुन सक्दैन।
तर सम्बन्ध बाहिरिएपछि उनको अवस्था सहज हुँदैन। यो प्रकारको पीडा पुरुषलाई भन्दा महिलालाई धेरै बढी हुन्छ। यसको निराकरण विवाहको लागि उमेर कमसे कम १८ वर्ष राख्न सकेमा केही समस्या समाधान हुन सक्छ। सम्भवत महरासँग ती महिला नजिक हुनाको कारणमा महिलाको यौन आवश्यकता तर विवाहको उमेर नपुगेकोे पनि पर्दछ कि ?
यौन इच्छा छ र त्यो प्राकृतिक हो, यसलाई कानुन बनाएर नै जवानीमा रोक्न पनि सकिँदैन। २० वर्षभन्दा कम उमेरका युवतीले खुशीले नै यौनसम्बन्ध राखेमा सामाजिक परिवेशसमेतले पुरुषले विवाह नगरेमा उनीहरू पछि दोस्रो दर्जाको जस्तो बन्ने वातावरण अहिले पनि छ।
महिलामा यौन स्वच्छन्दता वा स्वतन्त्रताको कुरा गरेर पति–पत्नीको प्रगाढ सम्बन्धलाई अत्यन्त सामान्य र मात्र भौतिक सुखमा परिणत गर्नेमा महिलावादी भनिनेहरूको पनि ठूलो हात हुन्छ।
त्यसैले होला महिलाहरूले भन्ने गरेका पनि छन् कि लोग्ने नभएको समयमा घरमा किन बस्ने ? माइतीमा बस्छु। मैले सासू–ससुराको सेवा गर्नलाई विवाह गरेकी हुँ र ? यी सवाल समान्य हुँदै छन्। पति रोगी भएमा वा दुर्घटनामा परेमा महिलाहरूले पतिसँग अंश लिएर सम्बन्ध विच्छेद गर्ने चलन समान्य बन्दै छ।
यसले समाजमा दिँदै जान लागेको सन्देश भनेको नै पति र पत्नीको सम्बन्ध यौनकार्यको लागि मात्र हो। तर महिला कुनै कारणले रोगी भएमा पतिले आफ्नो अंश दिएर सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेमा पनि पति सामाजिकरुपमा नैतिकताहीन देखिने गरेको छ।कानुनहरू नै समाज र परिवारको संरचना खुकुलो पर्ने आधार बनेका छन्।
शायद महरासँग सम्बन्ध भएकी भनिएकी महिलासँग सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक ‘अदव’ भएको भए या त विवाहबाहिरको यौनसम्बन्ध राख्न तयार हुने नै थिइनन्, त्यस्तो भएमा पनि गोप्य राख्ने थिइन्। बरु महराले आफ्नी इमानदार पत्नीमाथि गरेको घातलाई सबैभन्दा ठूलो नैतिक अपराधजस्तो लागिरहेको छ।
अबको सुरक्षित अवतरण भनेको महराले ती महिलाबाट सत्यतथ्य बोल्न लगाउनु नै हो। आफूले पनि सौम्यरुपमा सत्य बताउने नै हो। यो कार्यलाई यौन अपराधभन्दा विवाहबाहिरको प्रकाशमा आएको कार्य हो र यसको पीडा महराकी पत्नी र ती महिलाका पतिसंँग नै सम्बन्धित हो भन्नेमा केन्द्रित गर्न सक्नुपर्दछ। यो कार्यले उनलाई जबर्जस्ती करणीको सम्भावनाबाट टाढा राख्न सक्नेछ।
अझै ती महिलाका पतिलाई त कानुनीरुपमा कुनै असर परेको छैन, किनभने हरेक महिलाले चाहेमा पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छिन्। सम्भवतः पहिलाकी पत्नीलाई कानुनीरुपमा अंश दिएर महराले ती महिलालाई पनि पत्नीको रुपमा स्वीकार गर्ने हो भने समाजले उनलाई कुनै पनि रुपमा अपराधी मान्दैन।
महराकै दलमा रहेका ठूला नेतासमेत धेरैले बहुविवाह गरेका घटना देखिएका छन्। समाजमा शतप्रतिशत त्यस प्रकारको नैतिक बन्नुपर्ने बोझ महरामा मात्र थोपर्न मिल्छ होला ?